Culumaa’udiinka iyo macalimiinta dugsiyada Qur’aanka oo tababar la siinayo. – Hornafrik Media Network
Culumaa’udiinka iyo macalimiinta dugsiyada Qur’aanka oo tababar la siinayo.
By Liibaan Nuur	 On Oct 2, 2018
HornAfrik-Wasiirka waasaaradda Awqaafta & Arrimaha Diinta JFS Mudane sheikh Nur Mohamed Hassan oo maalmahan safar shaqo ku joogay Dalka Turkiga ayaa waxaa uu maanta martiqaad rasmi ah ka helay jaamacadda Ondokuz Mayis oo ku taalla gobolka Samsun kuliyadeeda shareecada & Qaanuunka.
Madaxweynaha jaamacadda ayaa Soo dhamayn ballaaran u sameeyay wasiirka & wafdigiisa iyada laga wada hadlay sidii kuliyadda Shareecada ay wasaaradda ugu deeqi lahayd tacliin sare oo isugu jirta Bachelor & Master.
Shabaab iyo Daacish oo lacagta ugu badan ka hela Dhuxusha.
dhimasho iyo dhaawac ka dhashay shil gaari oo ka dhacay Mudug.